Gịnị bụ SDXC kaadị na ebe a na-emekarị na-eji?
The SDXC nwere ike na-ahuta ka ọhụrụ mgbakwunye n'ime SD kaadị ezinụlọ ka e ulo oru na afọ 2010 iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na mmekọrita mkpa na-achọ n'aka HD na tepụ. Ọ na-na-kwuru na mkpa nke ndị ọrụ na-abụghị nanị zutere ma ndị a kaadị-emekwa ka n'aka na ihe kasị mma nyere ka onye ọrụ ma ọ bụrụ na ha na-amasị gbaa ndị AVCHD usoro na Nchikota na mts na m2ts usoro. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na okwu nke nchekwa nakwa dị ka ndị a kaadị bụ mgbe niile n'elu 64GB na benchmark nke e mere ka ruo ugbu a bụ na nke 2TB na Ya mere onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na foto na na vidio ndị na-nke elu definition na-abụghị nanị weghaara kamakwa echekwara na tụkwasịrị obi na ndị kasị elu ohere nchekwa ikwe ka onye ọrụ iji nweta ha enweghị ihe ọ bụla nke. The data ide ọsọ bụkwa egwu na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike inwe arụpụta ihe kasị mma mgbe ọ na-abịa na-agbapụ na ịkụ mode ma ọ bụ na-eme n'aka na HD videos na-weghaara. The data ide ọsọ ike gbagoo 300MB / s nke kasị ukwuu n'etiti ndị ọzọ kaadị nke dịịrị otu udi. Ọ na-achọrọ site na onye ọrụ iji jide n'aka na n'ozuzu nchekwa mbipụta na-egbo site ịzụta ihe SDXC kaadị nke ga-eme ka n'aka na ọkaibe results na-enwetara na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nchekwa ikike ebi. Faịlụ usoro na a na-eji site SDXC kaadị bụ exFAT na ozi ọma bụ na ndị ọrụ nwere ike-enweta Micro SDXC kaadị na nso nso e agbam onya site emepụta ka n'ihu na-technology na-esonụ larịị. Na ojiji nke kaadị dị mfe ma ka ọ bụla ọzọ SD kaadị na ike-etinyere na-eji na ala na afọ ojuju. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike na-amalite site na ala ọsọ nke 104MB / s bụ nke na-otu n'ime ndị kasị n'anya mgbe ọ na-abịa kaadị nke yiri genre na maka otu ihe ruru ka data ide ọsọ na kaadị a bụkwa ukwuu tụrụ aro niile ọrụ nke mere na ha nke nke ohere na nchekwa na-kpebiri enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. SDXC kaadị na-n'ihu a na-mepụtara na nkà na ụzụ a na-edozikwa na ozuzu umu iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-nyere ka ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na kaadị s edozi na-elekọta ma na izu okè mere na ọ dịghị nke etịbe na nke a na nke kacha mma ọrụ na-enwe seamlessly.
Weghachi gị SDXC kaadị na nke kacha mma SDXC kaadị Iweghachite Software
Wondershare Data Recovery Bụ otu nke kasị mma na smoothest omume ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mmekọrita mweghachi nke SDXC kaadị na ala na afọ ojuju. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ka ndị kasị mma ojiji nke usoro ihe omume site na nbudata na ikpe mbipute mbụ dị ka ọ bụ ikpe mbipute nke na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma n'ime oge ọ bụla ma ọlị. The SDXC kaadị mgbake e weere dị a ike ọrụ ịrụ tupu kwuru omume na oru ma ugbu a, eji ire ụtọ nhazi na ikike aka nnukwu ego nke data na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi enweghị ihe ọ bụla nke na- nsogbu na na akara na mgbake chọrọ. Ọ bụ ya mere dụrụ-eso nzọụkwụ mmekọrita na data mgbake na a ga-kwuru na a ijide n'aka na pụta nwetara bụ ndị kasị mma na ọkaibe na nke a.
Usoro na a pụrụ iji jide n'aka na ọdịnaya nke SDXC kaadị na-natara na ala na afọ ojuju na-aha dị ka ndị a:
1. Site http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume ebudatara na arụnyere na-aga na software ojiji na yiri usoro:
2. The faịlụ ụdị a na-ahụ na-ahọrọ iji jide n'aka na ihe kasị mma na nke kasị uchu usoro a nakweere maka mgbake nke data:
3. N'oge kasị mma nzọụkwụ onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na faịlụ ọnọdụ na-akọwapụtaghị dị ka ọ ga-eme ka n'aka na usoro ibu na-tutu amama mgbe ọ na-abịa na-eweghachiri nnukwu ichekwa data. Ọ ga-eme ka n'aka na software na-eji usoro ego naanị chọọ ndị na-akụkụ nke disk ebe ihe omume e nyere n'iwu ma ọ bụ ebe faịlụ ọnwụ mere. Ọ bụrụ na ahụ dum disk na-enyocha ọ ga-ewe oge gbakwunyere a ga-enwe ibu na usoro:
4. Ozugbo faịlụ e natara onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na needful na mere eme n'aka na ihe ndị ha chọrọ ihe na-pịrị na họrọ nke mere na ọ bụ nanị ndị ihe na-natara na zuru item ndepụta na e weghachiri eweghachi nwekwara ike ịbụ natara naanị ma ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ ya na-adị. Ọkụkụ naghachi button ga-ahụ na usoro a biri ebe a:
Uru na ọghọm nke SDXC kaadị eji
Ka ọ bụla ọzọ omume ndị SDXC kaadị nwere ya uru na ọghọm nke bụ ka ndị a:
1. The onye ọrụ nwere ike ịzọpụta ibu nke data na-alụbeghị di na ebe maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na nchekwa na ebe nchekwa na-abughi chọrọ ka a gbanwee ma ọ bụ onye ga-azụta ọhụrụ kaadị.
2. The data ide-agba bụ kwa ngwa ngwa na àmà from104MB / s ka 300MB / s nke bụ bụghị nanị elu kamakwa ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a.
1. The ọrụ echekwara na data na otu ebe na ọ pụrụ ga-efu ruo mgbe ebighị ebi ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-eme na kaadị nke bụ oké mwepu.
2. The software nkwado nke kaadị bụghị ọma na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na ọ bụrụ na kaadị na-emerụ ma ọ bụ na nke etịbe mkpa onye siri ike ịhụ.
3 mfe nzọụkwụ naghachi formatted SD kaadị
Easy Guide nke Patriot Kaadị ebe nchekwa Iweghachite
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Best SDXC kaadị mgbake Software